I-Honor 20 iya kufika ngoqwalaselo lweekhamera ezine zangasemva | I-Androidsis
Imbeko iqinisekisa imodyuli yekhamera engasemva ye-Honor 20 yeflegi
Imbeko, i-sub-brand kaHuawei, ilungiselela ukumilisela ii-smartphones zayo kwi Imbeko 20 uthotho kumsitho wokwazisa ngoMeyi 21 eLondon. Ngaphambi koku, inkampani iqale ukuveza amanqaku kwiifowuni ezizayo.
Kwenye yezi teyi, inkampani yathumela umfanekiso kuWeibo kunye negama elibhaliweyo elithi "Ubuhle obuhle, iifoto ezine." Oku kuyakuqinisekisa oko i-Honor 20 eza kuza nokuseta ikhamera ye-quad kwiphaneli esemva, into ekucingelwe ukuba yenziwe ngaphambili.
Ngaphambili, umfanekiso weesethingi zekhamera yangemva yefowuni wawuvuliwe kwi-Intanethi. Ityhile loo nto i-Honor 20 iya kuba ne Ilungu le-586 MP Sony IMX48 njengoko isivamvo ephambili, Kunye ne-16 MP ye-lens ebanzi ye-engile ebanzi, inzwa yesibini ye-2 MP, kunye nenye inzwa ye-2 MP ngokunjalo, ngokunokwenzeka ekufumaneni ubunzulu.
Uqinisekiso lweekhamera ezine zangemva zeMbeko 20
Hlonipha uMongameli u-Zhao Ming ekwabelwana ngaye ngefoto yasebusuku e-Weibo, enokuthi ithathwe nge-Honor 20 okanye i-Honor 20 Pro. Umfanekiso uneenkcukacha ezibalaseleyo, ukunciphisa ingxolo, kwaye ubambe ukukhanya okuhle.
Ngokwokuvuza, i-Honor 20 iya kuba nayo Iscreen se-IPS-LCD esingu-6.26-intshi esitsiba inotshi kuyilo lomngxunya wokugqobhoza. Inika isisombululo sesikrini se-FullHD + 2,340 x 1,080 pixels kunye noxinano lwe-412 dpi.
I-smartphone iya kunikwa amandla yi-chipset ye-flagship yenkampani, engekho enye HiSilicon Kirin 980, kunye ne-6GB ye-RAM kunye ne-128GB yokugcina kwangaphakathi. Olunye uqwalaselo lwenkumbulo kunokwenzeka, kodwa oku kungasentla yiYurophu.
Iimpawu kunye nokubalulwa kweekhamera ze-Honor 20 kunye ne-20 Pro kuyatyhilwa
Isixhobo asinaso isikena seminwe esibekwe ngasemva, kodwa ekubeni ifowuni iza nescreen se-IPS-LCD, ayinaso isithwebuli somnwe esikrinini. Ke ngoko, Imbeko ihleli kwisikena somnwe esonyuswe icala esiphindwe kabini njengeqhosha lamandla.. Sele siyibonile le nto kwi Samsung Galaxy S10e.
Iselfowuni isebenzisa inkqubo yokusebenza I-Android 9 Pie ngeMicrosoft UI 2.1 ngaphezulu, kunye nako konke ukuzimela ukuba ibhetri ye-3,750 mAh exhasa i-22.5 W SuperCharge yokutshaja ngokukhawuleza inokubonelela. Okokugqibela, i-Honor 20 iya kufumaneka phakathi kobusuku obuMnyama kunye neSapphire Blue, kodwa ulwazi lwamaxabiso alukaziwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Imbeko iqinisekisa imodyuli yekhamera engasemva ye-Honor 20 yeflegi
Ungayicima njani iakhawunti yakho yeTelegram
IVodafone izakuzisa i-5G eYurophu kweli hlobo